XOG: Qatar oo bedeshey qorshaheeda siyaasadeed ee Soomaaliya. | Allgalgaduud.Com
Home Top News XOG: Qatar oo bedeshey qorshaheeda siyaasadeed ee Soomaaliya.
XOG: Qatar oo bedeshey qorshaheeda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Dowladda yar ee aadka u dhaqaalaha iyo galaangalka badan ee Qatar ayaa maalmihii la soo dhaafay toos wax uga bedeshay qorshaheeda macaamilka siyaasadeed ee Soomaaliya. Waxaa mar dhaw dalkaasi Qatar tagaya Ra’iisal wasaare Rooble, safarkaasi oo durba laga helayo macluumaad qarsoodi ahaa oo banaanka loo soo dusiyay.
Kornel Cabdalla ayaa heysta dhalada Qatar, waxaana uu kamid yahay saraakiisha NISA ee sida tooska ah ula shaqeeya CIA-da Maraykanka, balse waxaa uu ku eedeysan yahay duqeymo badan oo shacab lagu beegsaday.
Waxyaabaha kale ee Korneel Cabdullahi lagu eedeeyo waxaa kamid ah howlgallo isugu jiray qaarijin toos ah,iyo sumeyn siyaasiyiin iyo dadkaloo magac lahaa lagu dilay.
Maalmaha jadwalka doorashada oo is guraya, waxay xawaare usii yeeleysaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo saameynta Qatar.
Fahad la soo arag, waxaase la sugayaa halka tareenka ugu horeeya ee Korneelkan dhalashada Qatar heysto uu ku biraha surto.